बामदेव शक्ति सन्तुलनका गोटी, उहाँलाई सद्बुद्धी आओस् ! « Ok Janata Newsportal
बामदेव शक्ति सन्तुलनका गोटी, उहाँलाई सद्बुद्धी आओस् !
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिका एक पात्र बामदेव गौतम बेला–बेलामा चर्चामा आउन चाहान्छन् । बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हार व्यहोरेपछि सांसदको तक्मा गुमाएका बामदेवलाई सत्तासम्म पुग्न निकै हम्मे–हम्मे भयो ।
कहिले डोल्पा त कहिले कास्कीबाट उम्मेद्वारीको चर्चामा रहेका बामदेव अहिले भने सहजै सांसद बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पोल्टामा स्टाइकर भएकै बखत ओलीलाई रिझाएपछि बामदेवको सत्तासम्मको यात्रालाई सहज तुल्याएको थियो ।
अब, सांसदको लोगो पहिरिएपछि पनि बामदेवलाई पुगेको छैन । उनी अझै मन्त्रीको दौडधुपमा छन् । तर, मन्त्री बन्नका निम्ति संविधान बाधक बनेको छ । संविधानकै कारण मन्त्री नपाइने पक्का भएपछि उनमा छट्पटी पनि भइरहेको छ ।
आखिर नेपालको राजनीतिमा बामदेव मात्रै होइन अन्य नेताहरु पनि जनमतको कदर गर्दैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि सांसद बन्नुपर्ने, हुँदा–हुँदा प्रशासनिक निकायको मान्छे डा. युवराज खतिवडालाई समेत सत्ता छाड्न छट्पटी भइरहेको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नपाएको भए कुनै देशको राजदूत भएर जान समेत तयार थिए ।
एकजना व्यक्तिलाई यसरी उचालेर सांसदको तक्मा भिराउन सिंगो पार्टी उद्त हुनु भनेको आफू र आफ्नालाई पृष्ठपोषण गर्नुमात्रै हो । सकेसम्म राजनीतिमा नयाँ अनुहार नआओस् बाँडीचुँडी आफै खाऔँ भन्ने सिद्धान्त हो ।
प्रतिपक्षी झण्डै धर्म भुलेर सत्तामा प्रवेश गरिसकेको थियो थोरै अक्कल बाँकी रहेको कांग्रेस पछाडि हट्यो । यो भनेको नेपाली राजनीतिमा सिमिति दल र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । बामदेव त्यति ठूलो दिग्गज, अब सरकारले कायापलट नै गर्ने पनि त होइन तर शक्ति सन्तुलनको गोटी भने अवश्य हुन् ।
अहिले बामदेवको निद हराम भएको छ किनकी मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि । मन्त्री बन्दा अर्को के कायापलट हुने हो थाहा छैन । तर, एउटा कुरा सत्य हो, सांसद नहुँदा गर्न नसकिने कुरा अहिले गर्न सजिलो भएको छ ।
विभिन्न नीति, नियम, कानुन बनिरहेका छन्, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने बेला आएको छ यो दिशामा लाग्न बामदेवलाई सद्बुद्धि आओस् !